Steeltù Na-ahụ Maka Worldwa: amụma maka nchara ọla ụwa chọrọ itolite site na 5.8% na 2021 - China Foshan Hermes Steel
Steeltù Na-ahụ Maka Ọchịchị :wa: amụma maka nchara ọla ụwa chọrọ itolite site na 5.8% na 2021
Onye ahịa China-Singapore Jingwei, Eprel 15th. Dị ka ukara website nke World Steel Association, na World Steel Association wepụtara ọhụrụ version nke mkpụmkpụ-okwu (2021-2022) ígwè ina amụma akụkọ na 15. Nkwupụta ahụ na-egosi na nchara igwe zuru ụwa ọnụ ga-agbadata na 2020 Mgbe 0.2% gasịrị, ọ ga-abawanye site na 5.8% na 2021, na-ebute 1.874 ijeri tọn. Na 2022, nchara igwe zuru ụwa ọnụ ga-aga n’ihu na-eto site na 2.7%, na-eru 1,925 ijeri tọn.
Nkwupụta ahụ kwenyere na mgbasa nke abụọ ma ọ bụ nke atọ na-efe efe ga-agbasa na nkeji nke abụọ nke afọ a. Site na mmụba nke ịgba ọgwụ mgbochi, ọrụ akụ na ụba na mba ndị na-eri nchara ga-eji nke nta nke nta lọghachi na nkịtị.
Al Remeithi, Onye isi oche nke Kọmitii Nnyocha Ahịa nke World Steel Association, kwuru banyere nsonaazụ nke amụma a: “Ọ bụ ezie na ọrịa ọhụrụ pneumonia na-efe efe ewetala ọdachi na ndụ ndị mmadụ na ndụ ndị mmadụ, ụlọ ọrụ nchara n’ ụwa niile ka nwere isi ọma. Ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ 2020, ihe nchara nchara mba ụwa ka na-enwetatụ obere. Nke a bụ tumadi n'ihi mgbake na mgbagha siri ike nke China, nke mere ka ngwa ahịa China na-eto dịka 9.1%, ebe na mba ndị ọzọ n'ụwa, nchara achọkarịla site na 10.0%. N'ime afọ ole na ole sochirinụ, akụ na ụba toro eto Nchara na-emepe emepe ga-agbake nwayọ. Ihe ndị na-akwado ya bụ nchara nchara na atụmatụ gọọmentị maka ị nweta akụ na ụba. Agbanyeghị, maka ụfọdụ akụ na ụba emepe emepe, ọ ga-alaghachi n'ọkwa tupu ọrịa ahụ. Ọ ga-ewe ọtụtụ afọ.
N'ikwu okwu banyere ụlọ ọrụ na-ewu ihe na ụlọ ọrụ nchara, akụkọ ahụ kwuru na n'ihi ọrịa a, ọnọdụ mmepe dị iche iche ga-apụta n'akụkụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ ihe owuwu ahụ. Site na mmụba nke ịkwalite azụmahịa na azụmahịa, yana ịbelata njem azụmahịa, ọchịchọ ndị mmadụ maka ụlọ azụmaahịa na njem njem ga-aga n'ihu ịjụ. N'otu oge ahụ, ọchịchọ ndị mmadụ maka ụlọ ọrụ e-commerce logistics arịala, ọchịchọ a ga-etolite na ngalaba na-eto eto. Ihe dị mkpa nke akụrụngwa akụrụngwa amụbaala, ma mgbe ụfọdụ, ha abụrụla naanị ihe ọtụtụ mba ga-eji nwetaghachi akụ na ụba ha. N'ime akụ na ụba na-emepe emepe, ọrụ akụrụngwa ga-aga n'ihu na-abụ ihe kpatara ike ịnya ụgbọ ala. Na ụba akụ na ụba, atụmatụ atụmatụ mgbake akwụkwọ ndụ yana ọrụ mmezi akụrụngwa ga-eme ka ụlọ ọrụ na-ewu ihe chọọ. A na-eme atụmatụ na site na 2022, ụlọ ọrụ na-ewu ihe ụwa ga-alaghachi na ọkwa nke 2019.
Nkwupụta ahụ kwukwara na na ọkwa zuru ụwa ọnụ, na ụlọ ọrụ nchara, ụlọ ọrụ ụgbọ ala ahụ enweela nke kachasị njọ, a na-atụ anya na ụlọ ọrụ ụgbọ ala ga-enweta mgbake siri ike na 2021. A na-atụ anya ka ụlọ ọrụ ụgbọ ala ụwa laghachi na ọkwa nke 2019 na 2022. Agbanyeghi na ulo oru igwe na uwa etolitela site na odida ulo oru mbo na 2020, odida a di ezigbo ala karie na 2009. A na-atu anya na ulo oru igwe gha agbake ngwa ngwa. Na mgbakwunye, enwere ihe ọzọ dị mkpa nke ga-emetụtakwa ụlọ ọrụ igwe, ya bụ, ngwangwa nke digitization na akpaaka. Itinye ego na mpaghara a ga - akwalite uto nke ụlọ ọrụ igwe. Ọzọkwa, ọrụ ndụ akwụkwọ ndụ na atụmatụ itinye ego na ngalaba nke ume ọhụrụ ga-abụkwa mpaghara uto ọzọ maka ụlọ ọrụ igwe. (Isi mmalite: Sino-Singapore Jingwei)
Igwe anaghị agba nchara efere igwe anaghị agba nchara